Yini i-VPN? Ukhetha Kanjani Oyedwa? | Martech Zone
Yini i-VPN? Ukhetha Kanjani Oyedwa?
NgoLwesibili, ngoJulayi 14, i-2020 NgoLwesine, July 16, 2020 Douglas Karr
Sekuyiminyaka ngicabanga ukuthi ukuba nehhovisi kuwukutshala imali okuhle… kwahlinzeka amakhasimende ami ngomqondo wokuthi ibhizinisi lami lizinzile futhi liyimpumelelo, kwanikeza abasebenzi bami nosonkontileka indawo ephakathi nendawo, futhi kwakuwumthombo wokuziqhenya kimi.
Iqiniso ukuthi amaklayenti ami awazange avakashele ihhovisi futhi, njengoba ngehlisa uhlu lwamakhasimende ami futhi ngandisa umphumela ngamunye, ngangisebenza kakhulu futhi nehhovisi lami lalihlala lingenalutho isikhathi esiningi. Lokho bekuyizindleko impela… isikhala samahhovisi sibiza kakhulu kunesibambiso.
Manje ngisebenza phakathi kwezindawo engisebenza nazo, izikhumulo zezindiza, amahhotela, izitolo zekhofi, kanye ne-onsite namakhasimende ami. Elinye lamakhasimende ami laze langinika nesiteshi sami engizosebenzela kuso.
Ngenkathi amaklayenti ami egcina inethiwekhi enempilo evaliwe emphakathini, lokho akufani nezindawo ezisebenza ndawonye nezitolo zekhofi. Iqiniso ngukuthi iningi lalawo manethiwekhi abiwe avulekele ukuthwebula. Ngobufakazi nempahla yengqondo engisebenza kuyo usuku nosuku, angikwazi ukubeka engcupheni ukuxhumana kwami ​​ukuthi kuvuleleke umphakathi. Yilapho-ke Inethiwekhi yangasese yangasese iqala ukudlala.
A i-VPN, noma inethiwekhi yangasese yangasese, Umhubhe ophephile phakathi kwedivayisi yakho ne-inthanethi. Ama-VPNs asetshenziselwa ukuvikela ithrafikhi yakho eku-inthanethi ekuthonyeni, ekuphazanyisweni nasekuvinjelweni. Ama-VPN nawo angasebenza njengommeleli, akuvumela ukuthi ufihle noma ushintshe indawo okuyo futhi uvule iwebhu ngokungaziwa kusuka lapho ufuna khona.
Ukuhambahamba okuningiliziwe kokuthi i-VPN iyini, ungahle uthande nokuhlola isifundo sokusebenzisana seSurfshark, Yini i-VPN?
Kungani usebenzise i-VPN?
Ngokuqinisekisa ukuthi konke ukuxhumana kwakho kwe-Intanethi kubetheliwe futhi kuthungelwe kwezinye izindawo, kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa I-Network yangasese eyi-Virtual:
Fihla i-IP yakho nendawo - Sebenzisa i-VPN ukufihla ikheli lakho le-IP nendawo kusuka kumasayithi okuya kuwo nakubaduni.
Bethela ukuxhumeka kwakho - Ama-VPN amahle asebenzisa ukubethela okuqinile okungama-256-bit ukuvikela idatha yakho. Dlulisa amehlo kusuka kuzindawo ezine-Wi-Fi njengezikhumulo zezindiza nezindawo zokudlela ezinhle wazi amaphasiwedi akho, ama-imeyili, izithombe, idatha yasebhange nolunye ulwazi olubucayi alunakubanjwa.
Buka okuqukethwe kusuka noma yikuphi - Sakaza yonke imibukiso yakho nama-movie ku-HD evutha ngokushesha kunoma iyiphi idivayisi. Senze ngcono inethiwekhi yethu ukuthi inikeze ngejubane eliphakeme kakhulu ngaphandle kwemikhawulokudonsa. Landa noma yini ngemizuzwana, bese uxoxe ngevidiyo ngebhafa encane.
Vulela amawebhusayithi ahlolwe - Vula kalula amasayithi nezinsizakalo ezifana ne-Facebook, Twitter, Skype, Youtube, ne-Gmail. Thola okufunayo, noma ngabe utshelwa ukuthi akutholakali ezweni lakini, noma uma uku-network yesikole noma yehhovisi ekhawulela ukufinyelela.
Akukho ukubhekwa - Misa ukubheka ohulumeni, abaphathi benethiwekhi, kanye ne-ISP yakho.
Akukho ukuqondiswa kwe-geolocated - Ngokufihla ikheli lakho le-IP nendawo, i-ExpressVPN yenza kube nzima kumasayithi nezinsizakalo ukukhokhisa amanani aphezulu noma ukubonisa ukukhangisa okuqondisiwe okususelwa endaweni. Gwema ukukhokhiswa ngokweqile ngeholide noma i-oda eliku-inthanethi.
Ngoba i-VPN ifihla ikheli lami le-IP nendawo, futhi inginikeza nendlela enhle yokuhlola amasayithi amaklayenti ami ukuqinisekisa ukuthi izivakashi ezingaziwa zithola ulwazi olufanele lomsebenzisi.
Ungayikhetha Kanjani i-VPN
Akuzona zonke izinsizakalo ze-Virtual Private Network ezenziwe ngokulingana. Kunezizathu eziningana zokukhetha enye ngaphezulu kwenye. Ngamakhulu abahlinzeki abahlukahlukene, ukufunda i- Ukubuyekezwa kwe-Tunnelbear nokukhetha okulungile kusho ukuthola ukulingana okufanele phakathi kwezinsizakalo, ukusetshenziswa okulula namanani entengo.
Izindawo Zendawo - Uma ufinyelela i-Inthanethi usebenzisa i-VPN, wonke amaphakethe wedatha aqhamuka kwiseva ekude aye kwikhompyutha yakho noma kwidivayisi yeselula kumele adlule kumaseva womhlinzeki wakho we-VPN. Ngokusebenza okuphezulu, khetha i-VPN yama-PC anamaseva emhlabeni jikelele. Vele, izethembiso ze-VPN ngokufinyelela komhlaba akuqinisekisi ukusebenza okuhle kakhulu, kepha kuyisibonakaliso esibalulekile sokuthi ingqalasizinda yomhlinzeki ithuthukile futhi iyakwazi ukuletha ukusebenza okuphezulu.
Komkhawulokudonsa - Amabhizinisi amaningi anikezela nge-VPN yangaphakathi. Uma banokuningi komkhawulokudonsa, lokho kumnandi. Kodwa-ke, ukusebenza nge-VPN engenawo amandla kuzobambezela wonke umuntu oxhunywe kuyo kukhasa.
Ukuxhaswa Kweselula - Ukulungiswa kwe-VPN bekujwayele ukuba yibuhlungu, kepha izinhlelo zokusebenza zesimanje zihlanganise amandla we-VPN. Qiniseka ukuthi usebenza ngensizakalo ye-VPN enamakhono wedeskithophu neselula.
luyimfihlo - Kufanele uhlale wazi ngokuqinisekile ukuthi umhlinzeki wakho akaqoqi noma abelane ngemininingwane yakho yangasese futhi akalandeleli umsebenzi wakho. Khumbula ukuthi isithembiso sokugcina imfihlo ngokuphelele namajenali ayi-zero akusho ukuthi kwenzeka ngokuqinisekile. Eminyakeni embalwa edlule, kube namahlazo amaningana kunethiwekhi. Kunconywa ukuthi ukhethe i-VPN ye-PC kumhlinzeki ekomkhulu layo hhayi eYurophu noma eMelika.
Speed - Ama-VPN aphezulu avikela ubumfihlo bakho, kepha akuvumela ukuthi uqhubeke wenze okuthandayo ku-inthanethi, kufaka phakathi ukubuka amavidiyo aphezulu, ukudlala imidlalo eku-inthanethi, ukuphequlula iwebhu, nokufunda kabanzi mayelana impumelelo yezobuchwepheshe. Ungakholelwa ezikhangisweni. Njalo hlola ukubuyekeza okuku-inthanethi futhi wenze izivivinyo zakho. Lapho uvivinya isivinini senkonzo ye-VPN yekhompyutha, yenza izivivinyo eziningana ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku.
Inani - Kufanele uzimisele ukusebenzisa imali ukusebenzisa i-VPN ehamba phambili. Izinsizakalo zamahhala zingahle zilungele ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa, kepha zishiya kungathandeki uma zisetshenziswa nsuku zonke. Ama-VPN wamahhala wamakhompyutha weWindows ne-Mac ngokuvamile anemikhawulo eqinile yethrafikhi noma yejubane. Izindaba ezimnandi ukuthi iningi labahlinzeki be-VPN bama-PC likuvumela ukuthi uhlole insiza, uhlole ukusebenza kwayo, futhi uma kukhona okungahambi kahle, uzobuyiselwa imali.
Ukubuyekezwa kwamakhasimende nobungcweti kungasiza uma ukhetha phakathi kokunikezwa okufana kakhulu. Ezinye zezinto ezibaluleke kakhulu ezinquma ukuthi insizakalo ye-VPN yinhle noma imbi ibonakala kuphela ngemuva kwamasonto nezinyanga zokusetshenziswa. Bheka ubuhle nobubi, futhi ugxeke. Ayikho insizakalo ephelele engu-100%, kepha kusamele ukhethe efanelekile ngoba ama-VPN akhona ubuchwepheshe besikhathi esizayo.
Ngikhethile ExpressVPN ngoba inezindawo eziyi-160 zamaseva emazweni angama-94, isebenzisa ukubethela okungama-256-bit, inezinhlelo zokusebenza ezandisa indawo yakho, futhi inamanani nokusekelwa okuhle. Ngokushesha nje lapho ngivula i-Mac yami noma ngixhuma kwinethiwekhi ku-iPhone yami, ngibona i-VPN ixhuma futhi sengiyasebenza! Akudingeki ngenze noma yini ukumisa noma ukuxhuma nganoma yisiphi isikhathi… konke kuzenzakalelayo.
Thola Izinsuku ezingama-30 Mahhala nge-ExpressVPN
Ukudalulwa: Ngithola izinsuku ezingama-30 mahhala kwe-ExpressVPN yomuntu ngamunye osayinayo.
Tags: ExpressVPNumabhebhanaemhubheniinethiwekhi yangasese yangaseseVpnkuyiniyini i-vpn
Ukushaya kwenhliziyo: Khulisa ukuguqulwa okungu-10% ngobufakazi bezenhlalo
Izinkinga Eziphezulu Zezomthetho ngeBlogging